OnePlus9နှင့်9Pro: အင်္ဂါရပ်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု Androidsis
OnePlus9and9Pro သည် ၂၀၂၁ အတွက်အကောင်းဆုံးသောအမြင့်ဆုံးသောအထင်ကရအသစ်နှစ်ခုဖြစ်သည်
အာရုန်သည် Rivas | 24/03/2021 09:15 | NOTICIAS, OnePlus
နောက်ဆုံးတွင် OnePlus သည်၎င်း၏ OnePlus9စီးရီးစမတ်ဖုန်းသစ်နှစ်မျိုးကိုယခုနှစ်တွင်အမြင့်ဆုံးအတွက်အကောင်းဆုံးအချက်အချာကျအဖြစ်ပြသလိုက်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်မျှော်လင့်ထားသည့်ပမာဏများစွာဖြင့်ရောက်ရှိလာသည်၊ သို့သော်ထူးခြားချက်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအများအပြားရှိသည်၊ ယခင်အစီရင်ခံစာများတွင်ဖော်ပြခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောအံ့သြဖွယ်ရာများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
သူတို့ဖြစ်ကြသည် OnePlus9နှင့်9Pro သုံးစွဲသူများအတွက်အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည့်ဖုန်းများသည်ယနေ့ခေတ်လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက် Qualcomm ၏အင်အားအရှိဆုံး SoC မှဓာတ်ပုံများစနစ်အထိများပြားလာသည်။
1 အသစ်ဖြစ်သော OnePlus9နှင့်9Pro တို့၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
အသစ်ဖြစ်သော OnePlus9နှင့်9Pro တို့၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
စတင်သူများအတွက် OnePlus 6.55 တွင် ၆.၅၅ လက်မ Super AMOLED နည်းပညာမျက်နှာပြင်ရှိပြီး Pro version ၏ panel မှာ ၆.၇ လက်မ AMOLED LTPO ။ မျက်နှာပြင်တစ်ခုစီ၏ resolution သည်အသီးသီးအနေဖြင့် FullHD +9x 6.7 pixels နှင့် QuadHD + 2.400 x 1.080 pixels ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, နှစ် ဦး စလုံး၏အများဆုံး refresh rate သည် 120 Hz ဖြစ်သည်, သို့သော်၎င်းသည် OnePlus 1 Pro တွင် (120 မှ9Hz မှ) အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဒီ pair တစုံရဲ့ processor chipset ကတော့ Qualcomm Snapdragon 8885/8 GB LPDDR12 RAM နှင့် 3.1/128 GB UFS 256 အတွင်းသိုလှောင်မှုနေရာတို့နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည် ၄၅၀၀ mAh ဘက်ထရီနှင့် ၆၅ W မြန်သောကြိုးမဲ့အားသွင်းမှုများတပ်ဆင်ထားသည်။ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။ သို့သော်စံပြမော်ဒယ်တွင် 4.500 W ရှိပြီးအဆင့်မြင့်ဗားရှင်းတွင် 65 W ရှိသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ 15 W charger များနှင့်အတူထိုသေတ္တာထဲတွင်ပါဝင်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
တစ်ခုချင်းစီ၏ဓာတ်ပုံစနစ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ OnePlus9တွင်သုံးဆနောက်ဘက် module ပါ ၀ င်သည်။ အဓိကအားဖြင့် 48 MP ရှိသည့် aperturef/ 1.8၊ အကျယ်ထောင့်မှန်ဘီလူး 50 MP နှင့် aperturef/ 2.2 နှင့် monochrome sensor2တို့ပါဝင်သည်။ အမတ်။ selfie ကင်မရာနှင့် ပတ်သက်၍f/ 16 aperture ပါ ၀ င်သည့် 2.4 MP မှန်ဘီလူးရှိသည်။
OnePlus9Pro ၏နောက်ဘက်ကင်မရာတပ်ဆင်မှုမှာ quadruple ဖြစ်ပြီး 48 MP အဓိကသေနတ်သမားနှင့်အတူf/ 1.8 aperture ပါ ၀ င်ပြီးအကျယ်ထောင့်မှန်ဘီလူး 50 MP နှင့်f/ 2.2 aperture ပါရှိသည်။f/ 8 aperture ဖြင့် 2.4 MP ဖုန်းအာရုံခံကိရိယာ နှင့်2MP B / W ကင်မရာ။ selfie ကင်မရာမှာ 16 MP ပါ ၀ င်ပြီးf/ 2.4 aperture ပါ ၀ င်ပါသည်။
9 Pro ကို OnePlus
ဖုန်းနှစ်မျိုးစလုံး၏အခြားမတူညီသောအင်္ဂါရပ်များမှာ 5G ဆက်သွယ်မှု၊ Wi-Fi 6၊ ဖန်သားပြင်လက်ဗွေဖတ်စက်များ၊ အဆက်အသွယ်မရှိသည့်ငွေပေးချေမှုများအတွက် Dolby Atmos စပီကာ၊ NFC နှင့် Pro အတွက် OnePlus 5.1 နှင့်9အတွက် Bluetooth 5.2 တို့ပါ ၀ င်သည်။ အဆုံးစွန်သောဖြစ်ပါတယ် IP68 လက်မှတ်; စံမော်ဒယ်တွင်ရေစိုခံမှုရှိသော်လည်း၎င်းကိုစွန့်ပစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုမစမ်းသပ်သင့်ပါ။
မျက်နှာပြင် ၆.၅၅ လက်မအရွယ် Super AMOLED FullHD + resolution ဖြင့် ၂,၄၀၀ x ၁၀၈ pixels နှင့် ၁၂၀ Hz Refresh Rate ရှိသည်။ ၆.၇ လက်မအရွယ် AMOLED LTPO နှင့် QuadHD + resolution 6.7 x 2.400 pixels နှင့် 1.080 Hz refresh rate
လုပ်ငန်းစဉ် Snapdragon 888 Adreno 660 GPU နှင့်အတူ Snapdragon 888 Adreno 660 GPU နှင့်အတူ
ရမ် 8/12 GB ကို LPDDR5 8/12 GB ကို LPDDR5
ပြည်တွင်းသိုလှောင်မှု 128 / 256 GB UFS 3.1 128 / 256 GB UFS 3.1
နောက်ဘက်ကင်မရာ သုံးဆ:f/ ၁.၈ ဖြင့် MP ၄၃ MP (အဓိကအာရုံခံကိရိယာ) + ၅၀ MP (အကျယ်ထောင့်) + ၂ MP (monochrome) လေးဆ:f / 48 နှင့်အတူ 1.8 MP (အဓိကအာရုံခံကိရိယာ) + 50 MP (အကျယ်ထောင့်) +2MP (monochrome) + 8 MP (တယ်လီဖုန်း)
ရှေ့ကင်မရာ 16 အမတ် 16 အမတ်
OS OxygenOS ပါသော Android 11 OxygenOS ပါသော Android 11
ဘက်ထရီ 4.500 W မြန်သောအားသွင်းခြင်းနှင့် 65 W ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းတို့နှင့်လိုက်ဖက်သော 15 mAh ၄၅၀၀ mAh ကို ၆၅ W ကြိုးမြန်မြန်အားသွင်းနိုင်ပြီး ၅၀ W ကြိုးမဲ့မြန်နှုန်းအားသွင်းသည်
ချိတ်ဆက်မှု 5G ။ ဘလူးတုသ် ၅.၁ ။ Wifi 5.1. USB-C ။ NFC 5G ။ ဘလူးတုသ် ၅.၁ ။ Wifi 5.2. USB-C ။ NFC
အခြားသတင်းများ အင်္ဂါရပ်များ စတီရီယိုစပီကာ စတီရီယိုစပီကာ။ IP68 အသိအမှတ်ပြုခံရသည်
စမတ်ဖုန်းနှစ်ခုလုံးကိုစပိန်နှင့်အခြားဥရောပနိုင်ငံများတွင် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှတ်တင်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေရသော်လည်းရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်အပတ်အနည်းငယ်တွင်ယင်းသည်ဖြစ်ပျက်သင့်သည်။
OnePlus9ကိုပေးသောအရောင်များမှာ Winter Mist, Arctic Sky နှင့် Astral Black တို့ဖြစ်သည်။ Pro တွင် Morning Mist, Pine Green နှင့် Stellar Black တို့ဖြစ်သည်။ စပိန်စျေးကွက်အတွက်ကြေညာထားသောစျေးနှုန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
၈ + ၁၂၈ GB 709 ယူရို
၈ + ၁၂၈ GB 809 ယူရို
၈ + ၁၂၈ GB 909 ယူရို
၈ + ၁၂၈ GB 999 ယူရို
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » NOTICIAS » OnePlus9and9Pro သည် ၂၀၂၁ အတွက်အကောင်းဆုံးသောအမြင့်ဆုံးသောအထင်ကရအသစ်နှစ်ခုဖြစ်သည်
Campsites များကိုရှာရန်အကောင်းဆုံး App များ
သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းများသည်သင်၏မိုဘိုင်း (သို့) Google TV ဖြင့် Chromecast တွင်အချိန်မတန်ဘဲပိတ်ထားပါသလား။ ကျနော်တို့အဖြေရှိသည်